Recipe sakafo mangatsiaka
Fa maninona no tsy maivana ny hazandriko endasina?
Ny hafetsena amin'ny fanaovana azy tsara dia ny tsy fitovian'ny koba. … Raha toa ka tsy mangotraka ny koban-trondro rehefa masaka dia andramo manify ny koba miaraka amin'ny rano kely kokoa. Tena zava-dehibe ihany koa ny famafazana mialoha ny menaka amin'ny mari-pana mety raha tsy izany dia hitroka be loatra ny menaka ny trondro rehefa mahandro. …
Valiny haingana: Hafiriana no ahafahanao mitahiry tongolo nendasina?
Haharitra 3 na 5 andro ao anaty vata fampangatsiahana ny tongolo voatahiry tsara sy masaka. Mandra-pahoviana no avela amin'ny mari-pana ny tongolo masaka? Mitombo haingana ny bakteria amin'ny hafanana eo anelanelan'ny 40 ° F sy 140 ° F; tongolo masaka dia tokony hariana raha avela mihoatra ny 2 ora amin'ny mari-pana. Mandra-pahoviana ny crispy…
Azonao atao ve ny manendy makamba lolo mangatsiaka?
Ampidiro ao anaty lovia na harona ny makamba mangatsiaka. Raha manao makamba lolo ianao dia ataovy azo antoka fa ao anaty sosona iray izy ireo. Alefaso amin'ny Air Fryer amin'ny 390 mandritra ny 10 minitra. Arosoy araka izay tiana. Azoko atao ve ny mametraka makamba mangatsiaka ao anaty fryer? Raha mampiasa makamba manta mangatsiaka dia apetraho ao anaty…
Azonao atao ve ny mampiasa Frylight handrahoana atody?
Atsipazo amin'ny Frylight ny vilany ary apetraho amin'ny afo midadasika. Andraso mandra-pahazavan'ny Frylight, vakio ny atody ao anaty vilany ary andrahoy araka izay tianao. Miaraha manompo ary ankafizo. Afaka manendasa atody amin'ny menaka famafazana ve ianao? Famafazana vilany kely tsy miraikitra amin'ny famafazana fandrahoan-tsakafo. Afanaina amin'ny afo antonony ny vilany. Tapaho ny atody ho…
Nanontany ianao hoe: Afaka manafana fery ve ianao?
Ny fatana dia safidy tsara hafa amin'ny fanamainana indray ny lovia manendy na ny legioma nendasina. Asio menaka ary avereno atao amin'ny afo malefaka ny sakafo mba tsy ho masaka be loatra. Tena tianao ny hanakorontana matetika mba hanafanana tsara. Azonao atao ve ny manafana hena amin'ny microwave? Araka ny filazan'ny Independent and the European Food Information…
Impiry ianao no afaka mampiasa menaka legioma mandritra ny fanendasana lalina?
Ny soso-kevitray: Miaraka amin'ny sakafo voatoto sy voatoto, avereno ampiasaina in-telo na inefatra. Miaraka amin'ny zavatra endasina madio kokoa toy ny poti-ovy, dia tsara ny mampiasa menaka intelo fara fahakeliny — ary mety ho lava kokoa, indrindra raha feno menaka vaovao ianao. Afaka mampiasa menaka anana ve aho rehefa avy endasina lalina? Eny, azonao ampiasaina indray. Fa…
Ahoana no fitahirizanao voatabia maitso nendasina?
Ahoana no hiarovanao ny voatabia maitso nendasina tsy ho levona? Ahoana no fitehirizana voatabia maitso nendasina tavela? Rehefa nendasina izy ireo, dia manoro hevitra aho raha mihinana avy hatrany ny voatabia. Na izany aza, raha misy sisa tavela dia azonao tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny telo andro. Hafanaina indray dia asio vilany misy menaka eo ambony…
Valiny tsara indrindra: Mila masaka ve ny hena tsy voatsabo?
Ny marina dia ny bacon rehetra dia tsy maintsy sitrana alohan'ny hanina. Raha mbola bacon efa sitrana ny bacon tsy voatsabo, dia mandalo dingana hafa be izany. Fomba tsara kokoa ho anao sy hanitra kokoa! Raha tsorina, ny bacon tsy voatsabo dia bacon izay tsy sitrana tamin'ny nitrate sy nitrites azo avy amin'ny sentetika. Efa masaka ve ny bacon tsy voatsabo? Ny…
Mety harary ve ianao amin'ny frites frantsay tsy masaka?
Mety ve ny mihinana frites tsy masaka? Tsy manta tanteraka ny ovy tsy masaka. Izy ireo dia ovy izay potipotika ny ankamaroany, saingy tsy tanteraka. Izany no mahatonga azy ireo ho azo antoka kokoa noho ny ovy manta, fa tsy azo antoka tanteraka. Na izany aza, tsy dia tsara toy ny ovy masaka tanteraka izy ireo. Mety harary ve ianao amin'ny french frites tsy masaka? Raha…
Ahoana no mahandro pizza efa masaka?
Ahoana no mahandro pizza efa masaka ampahany? Torolàlana momba ny fandrahoan-tsakafo pizza efa masaka Atsofohy amin'ny 400-425 degre ny lafaoro. Apetraho ao anaty lafaoro ny pizza tsy voafono ary andrahoy mandritra ny 8-12 minitra eo ho eo. Ny pizza dia tokony hatao rehefa lasa volomparasy ny fromazy. Ahoana ny fomba hanafanana ny pizza efa masaka? Hafanaina indray ny pizza ao anaty lafaoro Hafanaina mialoha ny…
pejy1 pejy2 ... pejy883 Manaraka →
Salama daholo! Izaho dia Ninel ary heveriko fa ny olona tia mahandro, fa tsy manendasa, mangotraka ary etona tsindraindray, dia tsy afaka miaina tsy misy sakafo matsiro. Ahoana anefa ny fomba hanomanana sakafo matsiro tsara mba ho salama? Misy fomba fanamboarana maro an-tserasera, saingy tiako ny hizara vitsivitsy aminao.
© 2022 Fomba fahandro